मार्केटिङका लागि नयाँ योजनाका साथ जानेछौं | TOURISM TIMES
मार्केटिङका लागि नयाँ योजनाका साथ जानेछौं
आदित्य बराल, निर्देशक
टुरिजम मार्केटिङ एण्ड प्रमोसन, नेपाल टुरिजम (पर्यटन) बोर्ड
आदित्य बराल बिगत १४ वर्षदेखि नेपाल टुरिजम बोर्डको टुरिजम मार्केटिङ एण्ड प्रमोसन विभागमा हुनुहन्छ । कुनैबेला राष्ट्रिय योजना आयोगको सल्लाहाकार, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको परराष्ट्र सल्लाहाकार समेतको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएका बरालले लामो समयदेखिे पर्यटन बोर्डको बजारीकरण र प्रर्वद्धनको नेत्तृत्व गरिरहनुभएको छ । गत हप्ता १५ औं वार्षिकोत्सव मनाएको बोर्डको राष्ट्रिय —अन्तराष्ट्रिय बजार प्रर्वद्धनको अवस्था, भविष्य र रणनिति सम्बन्धमा टुरिजम टाइम्सका लागि बरालसँग सन्तोष पोख्रेलले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः
भर्खरै पर्यटन बोर्डले १५ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । यो अवधिमा बजारीकरण र प्रर्वद्धनको अनुभव कस्तो रह्यो ?
पहिले र अहिले पर्यटन बोर्डले गर्ने बजारीकरण र प्रर्वद्धनको स्वरुप थप परिष्कृत र प्रभावकारी हुँदै गएको छ । कुनै बेला पर्यटन बोर्डले ४—५ करोडको कुल बजेटमा राष्ट्रिय—अन्तराष्ट्रिय प्रर्वद्धनको कार्य गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले पर्यटन बोर्डको बजेटमा पनि समयानुकुल वृद्धि भएको अवस्था छ । सो अनुरुप बोर्डले नेपाली पर्यटनको बजारीकरण र प्रर्वद्धनमा पनि निरन्तर कार्य गरिरहेको छ । अहिले हामी विश्वका प्रमुख पर्यटन सम्भावना भएका राष्ट्रहरुमा निरन्तर सेल्स मिसन, रोड सो , प्रर्दशनीहरुमा नियमित सहभागी भएर हामीले बजारीकरण र प्रर्वद्धनको कार्य गरिरहेका छौं । अहिले बजारीकरण र प्रर्वद्धनमा इण्टरनेट मार्केटिङ जस्तो माध्यम बढी प्रभावकारी र उपयोगी हुने भएकाले त्यसमा जोड दिएका छौं । अहिले हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म नेपाली पर्यटनको बजारीकरण र प्रर्वद्धनमा पर्यटन बोर्डले कार्य गरिरहेको छ ।
ग्लोबल मार्केटमा हाम्रो उपस्थिति कस्तो छ ?
ग्लोबल मार्केटको कुरा गर्दा हामी सबै विश्वमा पुग्ने होइन । हामीले हाम्रो सम्भावित बजारमा केन्द्रित हुने हो । अहिले हाम्रो बजार भारत,चीन, अमेरिका, जापान, फ्रान्स लगायत युरोपका राष्ट्रहरु, अष्ट्रेलिया मुख्य छन । त्यसैले हामीले यिनै ठाउँबाट थप पर्यटक ल्याएर लाभ हासिल गर्न विभिन्न बजारीकरण र प्रर्वद्धनका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं । यसमा निजी क्षेत्रले पनि यिनै सम्भावित बजारमा जान जोड दिने गरेको छ । हाम्रो लक्ष्य निजी क्षेत्रलाई पनि सामेल गरेर जाने भएकाले हामी नेपालको परम्परागत बजार भनिएका क्षेत्रमा केन्द्रित भएका हौं । त्यस्तै अहिले नयाँ गन्तब्यका रुपमा उदाएका इजरायल, ब्राजिल, अर्जेन्टिना जस्ता ठाउँमा पनि हामीले नेपाल प्रर्वद्धन गर्नु आवश्यक छ । जसका लागि हामीले त्यस्ता ठाउँमा कन्जुमर टु कन्जुमर (सिटुसी) मार्केटिङमा जोड दिएका छौं ।
तर, व्यवसायीहरु तथा सम्बन्द्यितहरु त पर्यटन बोर्डले उपयुक्त बजारीकरण र प्रर्वद्धन गर्न नसक्दा पर्यटन आगमन सोचेजस्तो वृद्धि नभएको बताउँछन नि ?
यसमा म असहमत त छैन । तर, पर्यटन बोर्डले आप्mनो स्थानबाट सक्दो कार्य गरिरहेको छ । हामीले हाम्रो बजेट र स्रोत साधनले भ्याएसम्मको कार्य गर्ने नै हो । अहिले हाम्रो बजेट बढेको छ । तर, बिदेशी मुद्रा पनि सोही अनुसार बढेको छ । जसले हामीले चाहेर पनि ग्लोबल मिडियामा प्रचार प्रसारका कार्य गर्न सकेका छैनौं । तर, अहिलेको पर्यटन आगमन पनि पर्यटन बोर्डको बजारीकरण र प्रर्वद्धनको उपलब्धि हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । त्यस लगायत कतिपय निति नियम, व्यवस्था र परिस्थितिका बीच पनि हामीले चाहेर पनि सोचेको काम गर्न नपाएको अवस्था छ । नेपाली वायुसेवाको अन्तराष्ट्रिय उपस्थिति नहुनुले पनि समसया सिर्जना भएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि हामीले निरन्तर काम गरिरहेका छौं ।
बजारीकरण र प्रर्वद्धनमा कसरी अघि बढयो भने अहिले भन्दा उपयुक्त नतिजा आउला जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
कसरी अघि बढने भन्ने त्यस्तो कुनै निश्चित सुत्र त छैन , अहिले हामीले मुख्य प्रभावकारी ठानिएका रोड सो, सेल्स मिसन, प्रर्दशनी, कन्जुमर टु कन्जुमर तथा इन्टरनेट मार्केटिङमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं । यसका अलावा हामीले विगतमा बीबीसी, सिएनएन जस्ता ग्लोबल मिडिया मार्पmत गरेको प्रमोसनलाई निरन्तरताको प्रयास गरिरहेका छौं । यसमा मुख्य कुरा बजेटको हो । पर्यटन वर्ष २०११ को समयमा ति मिडियाले नेपाललाई माया गरेर निकै कम रकममा नेपाल प्रर्वद्धन गरिदिएका थिए । अहिले त्यो बजेटमा प्रर्वद्धन गर्न उनीहरु तयार हुँदैनन । यसैले थप बजेट व्यवस्था गरेर ग्लोबल मिडियामा जान सके उपलब्धि हुन्थ्यो भन्ने हो । यसका लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौं ।
पर्यटन बोर्डको मुख्य कार्य अन्तराष्ट्रिय बजारीकरण र प्रर्वद्धन भए पनि बोर्ड अहिले देशमै बढी अल्मलिएको जस्तो देखिन्छ । किन यस्तो अवस्था आयो ?
बिदेशबाट पर्यटक नेपाल ल्याउन पर्यटन बोर्डले अन्तराष्ट्रिय प्रर्वद्धनको कार्य जसरी गरिरहेको छ । त्यसमा देशमा पर्यटकीय चेतना विकास र बिस्तारमा पनि कार्य गरिरहेको हो । नेपालमा पर्यटक आएर मात्र भएन । पर्यटकका लागि आवश्यक गन्तब्य, व्यवहार र व्यवसायिकता विकासका लागि सबैमा पर्यटन चेतना पनि हुनु पर्यो । जसका लागि पर्यटन बोर्डले अन्तराष्ट्रियका साथै राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको हो ।
आगामी दिनमा बजारीकरण र प्रर्वद्धनका लागि कुनै नयाँ योजना छन कि ?
अहिले पर्यटन बोर्डले आप्mना सकै कार्यहरुलाई प्रभावकारी बनाउने गरी पञ्चवर्षीय योजना बनाएर अघि बढने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि अहिले हामी छलफलमै छौं । बजारीकरण र प्रर्वद्धनको क्षेत्रमा पनि हामी सोही अनुरुप योजना बनाएर अघि बढछौं । अब हामी नयाँ योजना र रणनितिका साथ नै अघि बढछौं ।
This entry was posted on February 19, 2014 by tourismtimesnews in Interview and tagged Interview.